Hupenyu Assurance - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
ZVINOKOSHA / Hupenyu Kuvimbiswa
Isu tinoshanda sisitimu yeQuality Management inobvumidzwa uye yakasimbiswa kune ISO 9001: 2015 zviyero. Izvi zvinoratidza kuzvipira kwedu mukuenderera mberi kwekuvandudza mhando uye kugutsikana kwevatengi. Yedu chirongwa chekusimbisa mhando inoita WayKen sarudzo yakachengeteka, uye yakavimbika pane yako inotevera chirongwa.
Yedu Yemhando Chinangwa:
Yakagadziriswa chigadzirwa chinopfuura chiyero ≥ 95%
On-nguva dhirivahari yekuendesa ≥ 95%
Kugutsikana kwevatengi ≥ 90%
Quality Management Maitiro
CreateProto yakazvipira kuramba ichivandudza uye kugadzirisa kugona kwese kwese kwese kugadzira zvigadzirwa kubva kumumvuri kusvika mukugadzira uye nehunhu hwedu kudzora maitiro, kusanganisira CNC machining, kukurumidza prototyping uye nekukurumidza tooling.
Iyo Hodhi Sisitimu paGadziraProto inotarisa pane zvido zvevatengi ichiri kuvandudza hunyanzvi uye hunofambira mberi matekiniki ekugadzira echinyakare zvikamu neako maratidziro anodarika zvinotarisirwa. CreateProto iri zvachose maererano ISO 9001: 2015 vaipupurirwa yepamusoro rokuongorora hurongwa, tinoshandisa yemhando yokuedzwa michina kuyera uye kuongorora zvose mbishi zvinhu, apo yedu yepamusoro injiniya chikwata pachake nyanzvi rwokugadzira kuongorora uye nechokwadi mapurojekiti ako inoomerera yepamusoro Specification, kuti kuwana chivimbo chevatengi vedu mumaindasitiri.
Yedu Yemhando Policy
Simbisa zvakaenzana uye nesainzi manejimendi mazano. Gadzira zvinonzwisisika zvekushanda nzira uye mashandiro emakodhi; Dzidzisa vashandi vakanaka vane hunyanzvi hwekutanga-kirasi; Natsiridza kugadzirwa kunyatsoshanda.
Kubva pane izvo zvinotarisirwa uye hunhu kubva kune vatengi, isu tinoramba tichisimbisa akawanda maficha ekushanda uye manejimendi senge kuronga kwekugadzira manejimendi, kugadzirwa kwemaitiro ekugadzirisa, kugadziridza cheni kurongedza kugadzirisa, kugadzirwa kwemitengo kudzora, uye mhando yevashandi. Kuenderera mberi nekuvandudza, kutsvaga kugona, uye kuenderera uchiwedzera kugutsikana kwevatengi.
Unhu uye Kubudirira
Kuburikidza nekumisikidzwa kweiyo yakazara mhando yemhando manejimendi manejimendi, panguva yega yega mugadziriro mukusimbisa kudzora kwemhando yepamusoro uye kuongorora, kuona kugadziriswa kwemaitiro ekambani, uye kutaurirana kwakanaka pakati pevatengi nemadhipatimendi, zvakare kudzidzisa ruzivo rwevashandi, vachimanikidza kusimudzira ramba uchiteedzera tekinoroji, uye nekugadzira zvakanaka zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Innovation uye Enterprise
Ita sangano rekudzidza, shandisa ruzivo rwekugadzirisa, kuunganidza uye kuronga ruzivo rwekugadzirisa uye nzira dzekudzivirira, teknolojia yekugadzira kubva kuvanyanzvi vezvematongerwo enyika kana madhipatimendi, data yebhizimisi kana zviitiko zvekugadzira kuti zvigadzire zvakakosha zvakakosha zvekambani, kupa mikana yekudzidzira yevashandi, pfupisa ruzivo, kukurudzira hunyanzvi uye kuwedzera kubatana kwekambani.
Yedu mhando maitiro inoitwa kuburikidza neese mapurojekiti kubva kuRFQs kusvika kugadzirwa kutumira. Ongororo mbiri dzakazvimiririra dzekutenga ndeapo QA yedu inotangira, ichiona kuti hapana mibvunzo kana makakatanwa maererano nezviyero, zvinhu, huwandu kana mazuva ekuendesa. Zvino dzinoongororwa nevane ruzivo vashandi vanobatanidzwa mukumisikidzwa uye kugadzirwa uye yega yekuongorora mishumo inoitwa kune yega yega mashandiro ayo anodikanwa kuti abudise chikamu. Zvese zvakasarudzika zvemhando yepamusoro zvinodiwa uye mirairo zvakanyorwa uye nguva dzekuongorora dzinozopihwa zvichibva mukutsungirira, huwandu kana kuomarara kwechikamu. Isu tinodzikisira njodzi nekutevera uye kuongorora nhanho dzese dzeyedu nzira yekugadzira kudzikisira chikamu kupatsanurana, uye nekuvimbisa hunhu, hwakavimbika mhando yechikamu chimwe nechimwe, nguva dzese.
Inoenderana kudzora kwemhando yepamusoro, kubva muchikamu kuenda muchikamu, chigadzirwa kune projekiti, isu tinoteerera kune zvakadzama, kugadzirisa matambudziko, kutsvagisa zvinhu zvitsva nemaitiro, kuisa mari muhunyanzvi, kuvaka nekusimbisa timu yehunyanzvi yekugadzira nekukurumidza.
Dhizaini yekugadzira (DFM) ongororo kune ako ese mapurojekiti
Chibvumirano uye mutengi odhita ongororo
Kugadzira kugona uye kuronga kuronga (PMC)
Inouya mbichana yekuongorora
Samples uye mu-maitiro ekuongorora (IPQC)
Kudzora kwechigadzirwa chisina kuenderana uye kuitiswa kwekugadzirisa uye kwekudzivirira zviito
Kuongorora kwekupedzisira uye kuyedza mishumo uye zvitupa sezvinodiwa (OQC)
Kuongorora kwevatengi kugutsikana kaviri pagore, uye shingairira kupfuura zvinotarisirwa nevatengi
Yemhando Yekuongorora Midziyo
SEREIN Croma 8126 Coordinate Kuyera Mashini (CMM) 800 × 1200 × 600 (mm), MPE (yakanyanya kutenderwa kukanganisa) 3.0μm
ScanTech PRINCE775 Handheld 3D Scanner Laser sosi: 7 + 1 dzvuku laser michinjikwa / 5 yebhuruu yakafanana laser mitsara Inoshanda yebasa 200mm ~ 450mm / 100mm ~ 200mm, Kurongeka Kusvika ku0.03mm
Granite Kuongorora Tafura, 1200 × 1000 (mm) / 1000 × 750 (mm)
Digimatic Heitht Zvikamu, 0-600 (mm)
Rizere Range reVernier Caliper, 0-100-150-200-300-600-1000 (mm)
Kunze kweMicrometer / Digimatic Holtest, 0-25-75-100-125-150 (mm) / 12-20-50-100 (mm)
Rizere Range rePini Gage / Gage Block, 0.5-12 (mm) / 1.0-100 (mm), Nhanho 0.01mm
Pamusoro Kuomarara Tester, Kuoma Tester, nezvimwe.
Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Kurumidza Prototyping, Cnc Rapid Prototyping, Kukurumidza Prototyping, Cnc Kuchengetedza, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services,